बर्दिवास बालिका हत्या र हत्या विरुद्धको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु प्रकरण :को को–कहाँ- कहाँ चुके ? – Shirish News
महोत्तरीको बर्दिबासकी ६ बर्षीया बालिका गुलब्सा खातुनको हत्या कसरी भयो ?
आरोपीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपनि स्थानीय किन आक्रोशित भए ?
आरोपीको घरमा कसरी आगो दन्कियो ?
न्यायका लागि भएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीलाई गोली चलाउने अवस्था किन आइपर्यो ?
प्रहरीको गोली लागेर सञ्जय न्यौपानेको मृत्यु कसरी भयो ?
घटनामा पीडित परिवार, प्रहरी–प्रशासन, राजनैतिक दल कहाँ, कसरी चुके ?
एकाएक वातावरण कसरी बिथोलियो ? यी र यस्तै प्रश्नहरु सबैको मनमा खेलिरहेका छन् ।
गुलाब्सा हत्या प्रकरणमा रिपोटिङ्ग गर्दा घटनाको पहिलो दिन (मंलगबार) नै केन्द्र विन्दु रह्यो । बालिकाको हत्या गरेर गएको सोमवार मध्यरातमा बोरामा शव फेला परेपछि प्रहरी–प्रशासन, मिडियादेखि जनतासम्मको ध्यान खिच्यो । बालिका हराएदेखि अक्रान्त भएको बर्दिबासको वातावरण पाँचदिनपछि फेरि पुरानै लयमा फर्किएको छ । यीनै घटनाक्रममा केन्द्रित भई पत्रकार राजकरण महतोको रिपोर्टर डायरीः
सोमबार मध्यरातमा मोवाइलमा टिन, टिन घण्टी बज्यो । फोन उठाएँ । ‘हराइरहकी बालिकाको शब भेटियो,’ महोत्तरीको बर्दिबास–१४ का वडा अध्यक्ष भरत हमालले अतालिदै भने ।
मैले सोंधे, ‘वडा अध्यक्ष ज्यू, शव कहाँ भेटियो ?’
उनले भने, ‘गाउँकै घरपछाडी झाडीमा बोरामा भेटिएको भनेर प्रहरीले खबर गरेकोे छ । तुरुन्त आउनुस् न । म पनि निस्किदैं छु ।’ ‘हस् म आएँ ।’
यसो घडी हेर्दा रातको २ बज्दै थियो । हुस्सुसंगै चलिरेको चिसो हावाले जाडो महसुस हुदैं थियो । तर फूल्नै लागेको कोपिलालाई पापीले निमोठेको सुन्दा भित्रैदेखि मन दुख्यो । चिसिएको मौसम एका एक तातो महसुस हुन थाल्यो । हात मुख नधुँदै म हतारिए । कोठाबाट तुरुन्त मोटरसाइकल निकालेर घटना स्थल तर्फ लागे । मस्त निदाएका क्यामरा पर्सन विवेक महतोलाई उठाए । उनलाई लिएर खाली सडकमा मोटरसाइकल हुइकाउँदै अघि बढे । बाटो सुनसान थियो । मनमा अनेकन प्रश्नहरु उब्जिन थालेको थियो । र त्यसको जवाफ खोज्न आतुर थिए म । खबर पाएको १० मिनेटमै म घटनास्थल पुगे । प्रहरीको भ्यान त्यहीँ सडकपेटीमै लागेको थियो । ५–६ जना प्रहरी उभिरहेका थिए ।
‘सर, हराइरहेकी बालिकाको शव भेटिएको हो ?,’ प्रहरीलाई सोंधे । सुनशान ठाउँमा कोही सुराकी गर्न आयो कि भन्ने भान प्रहरीलाई भयो होला । प्रहरीले भने,‘बालिकाको शव भेटियो भन्ने कुरा कसले भन्यो ?’
प्रहरीको प्रश्नमा मैले जवाफ फर्काइन । टाउकोमा लगाएको हेलमेट निकाले । प्रहरीसंगै रहेका पीडित बालिकाको बुवाले मलाई चिने । ‘तपाईं पत्रकार हनुहँुदों रहेछ ।’
आइतबारसाँझ बालिका हराएको खबर सोमबार एका बिहानै थाहा पाएको थिए । एक जना समाजिक अगुवा सारदा दाहालले बलिका वेपत्ता भएको खवर सम्प्रेशन गर्न बोलाएकी थिइन् । अनि म त्यही बालिकाको गाउँ पुगेको थिए । त्यसैबखत चिन्तित देखिएका बालिकाको वुवा शहिदले भनेका थिए, ‘मेरो छोरी हराएको छ । खोज्न सहयोग गरिदिनुस् ।’
बालिका भेटिने परिवारजनमा आश देखाए । कोठा फर्किएपछि बालिका बेपत्ता भएको समाचार लेखे ।
बालिका खोजी गरिदिन सबैमा अनुरोध भावको समाचार एकाविहानै प्रकाशित पनि भयो ।
त्यसरात घेरा हालेको र अध्याँरो भएकोले मध्य रातमा प्रहरीले घटना स्थल तर्फ जान दिएन । छोरीको हत्याले शहिदको होसहवास हराएको थियो । उनी एदमै नर्भस थिए । तैपनि रुँदै छोरी हत्या घटनाको वृतान्त सुनाए । हराएकै दिन उनले छोरीलाई स्कूलमा भर्ना गराएका थिए ।
‘अब पढ्न जानेभएपछि छोरी खुशी भएकी थिइन्,’उनले भने,‘ मेरो छोरी पढेर ज्ञानी बन्छ । आमावुवाको नाम रोशन गर्छ भन्ने कत्रो सपना थियो । पापीले छोरीको जीवनै समाप्त पारिदिए ।’
आँखै आगाडी नाचिरहेकी छोरीको मृत्यु भयो भन्नेमा उनलाई रतिभर पनि विश्वास थिएन । सन्तानका खुसीका लागि अभिभावकले सबथोक गर्छ । पसलमा साँझ चकलेट किन्न जाँदादेखि बेपत्ता भएकी थिइन् । हराएको छोरी भेटिने आशमा उनी मात्र होइन छर छिमेक, नातेदार सबैजना खोजीमा लागेका थिए । प्रहरी समेत उनको साथमा थियो । तर भेट्दा भने उनी जिवन समाप्त भइसकेको थियो । बेपत्ता भएको ३६ घण्टापछि उनको छोरीको लास भेटियो ।
शहिदसंगको कुरापछिराती पौने तीन बज्यो । घटना बारे थप बुझन् इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासमा फोन लगाए ।
त्यहाँबाट डीएसपी राजन चपागाईंले भने,‘बालिकाको हत्या गर्ने एक जना हाम्रो नियन्त्रणमा आइसक्यो ।’
‘को हुन् ती ?’डीएसपीलाई सोधें ।
उनले भने,‘महोत्तरीको गौशाला–५ जिरोमाइलका २६ बर्षीय अरुण कुमार साह छन् । उनले बर्दिबास घर बनाएर किराना पसल गर्दै आएका थिए । उनले आफै बालिकालाई हत्या गरेको स्वीकारेका छन् ।’ साह विरुद्ध प्रहरीले अपहरण, शरिर बन्धक, जबर्जस्तीकरणी र कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएको डिएसपी चापागाईले बताए ।
हत्या आरोपी कसरी प्रहरी नियन्त्रण आयो ?
‘बालिकालाई हत्या गरेर बोरोमा शव लुकाए । सोमबार साँझ वियर खाएर गौशालास्थित घर गएका थिए । उनले परिवारजनलाई बालिकालाई मारेको बताए । त्यसपछि अभिभावकले राती नै इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालामा बुझाएँ,’ डिएसपीले भने ।
गौशालाका इन्स्पेक्टर प्रकास रेग्मीले यो खवर बर्दिबासका डीएसपीलाई सुनाए । बर्दिबास प्रहरीले सोमबार राती साँढे १२ बजे ती युवकलाई लिएर आएका थिए । युवकले बालिकाको शव लुकाएको झाडी प्रहरीलाई देखाएका थिए ।
आरोपी साह पक्राउ परेपछि उनको अपराधी पृष्ठभूमी बारे पन्ना पल्टिदै गयो । उनीमाथि गौशाला र बर्दिबासमा हत्या र बलात्कार प्रयास गरेको समेत आरोप छ । विगतमा साह विरुद्ध अदालतमा कर्तव्य ज्यानमा मुद्धा छ । रक्सी खाएर आफ्नै साथीको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका उनी महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका थिए । जेल बस्नुपर्ने मानिस छुटेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन समेत गरेका छन् । छुटेर आएपछि उनी बालिकाको हत्या गरेका छन् । न्यायको आश मरेपछि बालिका हत्या प्रकरणपछि चर्को विरोध सुरु भयो ।
‘पापीले मेरी प्यारी छोरीलाई मारेरै छोड्यो, बच्चाले उनलाई के बिगार गरेको थियो,’ भन्दै उनको आँखाबाट आँशुको धार बग्न थाल्यो
आरोपी विरुद्ध यति बुझिरहँदा प्रहरीले स्थानीय, पीडित परिवार, जनप्रतिनिधि र संचारकर्मीको रोहबरमा बालिकाको मुचुल्का उठाए ।
बोराबाट बालिकाको शव निकालेपछि उनका बुवा शहिदले छोरीको मृत अनुहार हेरेर भक्कानिए । ‘पापीले मेरी प्यारी छोरीलाई मारेरै छोड्यो, बच्चाले उनलाई के बिगार गरेको थियो,’ भन्दै उनको आँखाबाट आँशुको धार बग्न थाल्यो ।
‘दाई नरुनुस् । जे हुनु थियो भइँगो । कानुनले तपाईंको छोरीलाई न्याय दिलाउँछ,’ उनलाई धेरै पटक शान्तावना दिए ।
बालिकाको घाँटीमा गहिरो चोट देखियो । कानबाट रगत बगेर गालमा लतपतिएको थियो । शरिभरी निलडाम थियो । तिघ्रामा पनि रातम्य निलडाम देखियो ।
‘बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको हो ?’भन्ने प्रश्नमा डीएसपी चापागाईंले भने,‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि बलात्कार भएको वा नभएको खुल्छ ।’
प्रहरीले मुचुलका उठाउँदै विहान भयो । गम्भिर खालको घटना भएकोले त्यहाँ गाउँलेको भिड बढ्दैं गयो ।
आक्रोसित भिडले बिहानै घटनास्थल नजिकै रहेको आरोपीको पसलमा तोडफोड गर्न अघि सरे । नेपाल प्रहरीको काबुबाट स्थिती बाहिर जान थाल्यो । लगतै थप मदतमा शसस्त्र प्रहरी आयो ।आरोपीको घर अगाडीको गेट सशस्त्र प्रहरीले घेर्यो । प्रहरीको आँखा छल्दैं भिडबाट आएका दुई युवा तीन तल्ले घरभित्र पस्यो । घरमा तोडफोड गर्न थाले । झ्यालको सिसा, टि.भी., फर्निचरका सरसमान घरबाट निकालेर बाहिर फाल्न थाले । प्रहरीले नियन्त्रण लिन खज्यो । तर, सकेन ।
यो क्रम बिहान साँढे सात बजेसम्म चल्यो । त्यसपछि आरोपीलाई समाजिक बहिस्कार गर्नु पर्छ भन्दै भिडबाट नाराबाजी हुन थाल्यो । लगतै भिडबाट पसल र घरमै आगो लगाइदिए । आलो सल्किएन । घरभित्र रहेको खाना पकाउने युवकहरुले ग्यास लिक गरे । उनीहरुले टायर ल्याएर पोट्रल खन्याए । अनि आगो दनदनी बल्यो । बर्दिबास नगरपालिका र धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाबाट प्रहरीले दमकल लिएर आयो । दमकल आउँदा बिहानको ८ बजिसकेको थियो । भिडले बाटोमा टायर बालेर अवरोध गरे । प्रहरी भन्दा प्रदर्शनकारीको संख्या बढी थियो । घरमा आगो दनकिरह्यो । भिड अगाडी प्रहरीको केही सीप चलेन । ग्याँसको सिलिण्डर पड्किएपछि आलो झन्झन दनकियो ।
राजनीतिक दल घटनाबारे चनाखो भएन । भिड भड्किने तिर प्रहरीले सोंचेन । न्यायिक आन्दोलनमा गोली चलाइयो । त्यो पनि रबरको होइन्, मान्छे मार्ने गोली ।संयमित भएका प्रहरी राजमार्गमा होस गुमाए । दमन गरेर प्रहरीले यही ठूलो गल्ती गरे ।
बलात्कारलाई फाँसी दें, हत्यारालाई कडा कारवाही गर, ओरोपीलाई तुरुन्त घटना स्थलमा ल्याएर हामीलाई जिम्मा लगा भन्ने नारा सहित घटना स्थलमै स्थानीयले प्रर्दशन गरे । घटनामा सई बीरेन्द्र सिंह र हबलदार फुलगेन मण्डलको मिलोमतो रहेको भन्दै स्थानीय झन् आक्रोसित भए । आक्रोसित स्थानीयले बिहान साँढे ८ बजे पहिलो पटक प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरे । त्यसको जवाफमा प्रहरीले टियर ग्याँस प्रहार गरे । ९ बजेतिर लास उठाएर पोस्टमार्टमका लागि पठाउन बर्दिबास उद्योग बाणिज्य संघले पीडित परिवार, गाउँले र डीएसपीलाई राखेर छलफल गराए ।
हत्यारालाई कडा कारवाही गर्ने, ओरोपी घर भत्काएर त्यहाँ बालिकाको स्मृति पार्क बनाउने, दोषी प्रहरीलाई निलम्बन गरेर कारवाही गर्ने लगायतको सहमति भयो । त्यो सहमती भिडमा गएर बाणिज्य संघले सुनाइयो । पैसा खाएर घटना मिलाउन लागेको भिडले आरोप लगायो । बालिकाका वुवाले भिडलाई माकिङ्ग गर्दै भने,‘त्यस्तो केही होइन् । बालिकाको शव पोस्टमार्टम गर्न जनकपुर पठाउन लागेको छ ।’ यति भन्दा पनि आक्रोशित स्थानीयले कुरा मानेनन् । शव उठाउन दिएनन् । गाउँलेहरुले बालिकाको फुफूलाई शव भएको ठाउँमा ल्याए । भिडले नाराबाजी चर्काउँदै लग्यो ।
प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्ग–इट्टा, बियरका बोतल हानिरह्यो । भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले पनि टियर ग्याँस पड्काइरह्यो । यती हुँदा बिहानको १० बजिसकेको थियो । तबसम्म हजारौंको भिड घटना स्थलमा कमिलाको झैं ताती लागिसकेका थिए । प्रहरीले आरोपीको घर समयमै तलासी गरेको भए बालिका बाँच्थें भन्दै प्रहरी विरुद्ध त्यो भिड खनियो । प्रहरी सिंह र मण्डलले आरोपीको घरमा सर्च नगरेको आरोेप लगाइएको थियो ।
राजनीतिक दल घटनाबारे चनाखो भएन । भिड भड्किने तिर प्रहरीले पनि गम्भिरतापूर्वक सोंचेन । नेताहरु विरुद्ध पनि स्थानीय आक्रोसित थिए । किन भने राती ४ बजेतिरै मुचुलका सकेको थियो । १० बजेपछि बर्दिबास नगरपालिका मेयर बिदुर कुमार कार्की पीडतको घरमा पुगेका थिए । त्यहाँ लाश उठाउन भनेर पीडित परिवारलाई सम्झाइरहेका थिए । उनको कुरो कसैले वास्ता गरेन ।
भिड अनियन्त्रित हुदैं गयो । भिडले लासलाई लिएर राजमार्ग बन्द गराउन बर्दिबास चोकमा हिड्यो । प्रहरी रोक्न खोज्यो । भिडले फेरी प्रहरीमाथि ढुङ्ग,इट्टा बर्सायो । आगो निभाउन ल्याएको दुई वटै दमकलको प्रदर्शनकारीले सिसी फुटाले।
राजमार्गमै शव राखे । १० बजेपछि घटनाको विरोधमा प्रदर्शन चर्किदै गयो । राजमार्गमा शव राख्नुअघि बिहानै आक्रोसित स्थानीयले राजमार्गमा टायर बालेर ठप्प परिसकेका थिए ।
शव प्रदर्शन गर्ने स्थानमा नेपाल प्रहरी विट छ । आन्दोलनकारीले त्यसमा ढुङ्गामुढा र आगजानी गर्न थालेपछि प्रहरी टोलीले लाटिचार्ज ग¥यो । टियर ग्याँस पड्काए । त्यहाँ पनि प्रहरीमाथि प्रर्दशनकारीले ढुङ्गामुढा गरे । भागदोड मच्यो ।त्यसैमा प्रहरीले गोली चलायो । त्यहाँबाट प्रहरीले बालिकाको शव नियन्त्रणमा लियो । पोस्टमार्टका लागि अस्पताल पठाइयो । काठमाडौंको आन्दोलनमा प्रहरीले पानीको फोहोरा दिएको सुनेको छु । तर, बर्दिबासमा भएको न्यायिक आन्दोलनमा गोली चलाइयो । त्यो पनि रबरको होइन्, मान्छे मार्ने गोली नै चलायो ।बिहानैदेखि संयमित भएका प्रहरी राजमार्गमा होस गुमाए ।प्रहरीबाट यही ठूलो गल्ती भयो ।
प्रहरीको गोली लागेर प्रदर्शनकारी र प्रदर्शनकारीको ढुङ्गा लागेर प्रहरी घाइते भए ।प्रहरीको गोली लागेर बर्दिबास–१ का बुद्धिराज भनिने सञ्जय न्यौपाने र बर्दिबास –५ का श्याम कार्की गम्भिर घाइते भएर सडकमा ढले । त्यसक्रममा टाउको फुटेर स्थानीय अफताक आलम पनि घाइते भए । बर्दिबासमा सञ्जयको उपचार सम्भव भएन । उनलाई हेलिक्टरबाट उपचारका लागि काठमाण्डौं पठाइयो भने श्यामलाई एम्बुलेन्स मार्फत ।
घाइतेलाई उपचारका पठाउँदैं गर्दा ३ बजेको थियो ।त्यसपछि फेरी आन्दोलनकारी सडकमा आए । मंगलबार दिनभरी अवस्था तनाब ग्रस्त बन्यो । घटनालाई लिएर बेलुका मात्रै स्थानीय राजनीतिक दल र प्रहरी– प्रशासनको बैठक बसेको थियो ।
दिनभरीको रिर्पोटिङ्ग लेखेर त्यस दिन सुते । दिनभरीको खटानले थकित थिए । खाना खाएर सुते । भोलिपल्ट बिहानै आँखा खुलद सञ्जय रहेन भनेर खबर आयो । बुझ्दा हो रहेछ । उनी सधैंका लागि अस्ताएको रहेछ । आन्दोलनमा अग्रपंत्तिमा देखिने उनको मृत्युले दुखित बनायो ।
त्यसपछि बर्दिबास सेवा समितिको पहलमा बैठक बस्यो । त्यहाँ सबै राजनीतिक दल, अगुवाहरुको उपस्थित रह्यो । कांग्रेसका नेता चिरञ्जी हमालको संयोजकत्वमा ११ सदस्य बार्ता समिति गठन भयो ।
सञ्जयलाई शहिद घोषणा गर्नु पर्ने, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ती दिनु पर्ने, घटनाको न्यायिक छानविन हुनु पर्ने र बालिका हत्यारालाई कडा कारवाही गर्नु पर्र्ने चार बुँदे माग राख्ने निर्णय गरियो । सञ्जयको मृत्युको घटनाले आक्रोस बढ्यो । आन्दोलन र बार्ता दुवै चलिरहेको । बुधबार दिउँसो प्रशासनसंग बार्ता समितिले बार्ता गरे । बिहिबार बार्ता कमिटि गुहमन्त्री रामबहादुर थापासंग भेट्न काठमाडौं गयो । बार्ता टोलीको माग सम्बोधन गर्ने भने ।बिहिबारै मृतक सञ्जयको पशुपति आर्यघाटमा अनत्येष्टि गरियो । शुक्रबार बालिका हत्या आरोपी विरुद्ध प्रहरीले किटानी जाहेरी दर्ता गरे । शनिबार बिहानैदेखि बर्दिबासको वातावरण शान्त बन्यो । जीवनमा यस्ता घटनाको रिपोटिङ्ग कहिले गर्नुनपरोस् । मृतहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जी । शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो सम्वेदना ।
गृहमन्त्रालयमा पुगेको वार्ताटोली। तस्बिर सौजन्य : चुडामणि पोखरेल